သင် မသိသေးတဲ့ Google ရဲ့ Fun Apps (၃) ခု – DigitalTimes.com.mm
သင် မသိသေးတဲ့ Google ရဲ့ Fun Apps (၃) ခု
Google ဟာ Android ကို ဖန်တီးထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စ်ိတ်လှုပ်ရှား ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ App များစွာကိုလည်း ဖန်တီးထားပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် App များဟာ လူသိနည်းပြီး သင့်ကို ပျော်စရာများ ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။
JustaLine ဟာ Augmented Reality App ဖြစ်ပါတယ်။ AR Drawing များကို သင့်ရဲ့ ဗီဒီယိုများမှာ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဗီဒီယိုများကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဗီဒီယိုများကို သူငယ်ချင်းများနဲ့ မျှဝေနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကို သုံးဖို့ သင့်ဖုန်းဟာ ARCore ကို ထောက်ပံ့ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Google Pixel , Galaxy S7 , S8 များမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို အောက်က ဗီဒီယိုမှာ လေ့လာပါ။
•	App version: 1.0.1
•	App size: 34.52 MB
•	App compatibility: Android 7.0 and above
Selfissimo! ဟာ Google Search Engine ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ သူက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး Selfie များကို ရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်က Poses များစွာ ပေးရမှာပါ။ သူက အကောင်းဆုံး Selfie များကို အလိုအလျှောက် ဖန်တီးပေးမှာပါ။ ပြီးရင်တော့ သင် အကြိုက်ဆုံး ပုံများကို ဖုန်းထဲကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
•	App version: 1.0.16
•	App size: 105 MB
•	App compatibility:Android 5.0 and later
Google Arts & Culture ကို သုံးရင်တော့ ကမ္ဘာအ၀န်းမှ နာမည်ကျော် ပြတိုက်များကို သင် တကယ် လေ့လာနေရသလို ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြတိုက်များရဲ့ သမိုင်းကြောင်းများကို ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုများဖြင့် ဝေေ၀ဆာဆာ လေ့လာနိုင်မှာပါ။ ပြတိုက်များမှ အနုပညာ လက်ရာပစ္စည်းများ၊ သမိုင်းဝင် ပစ္စည်းများကို အနီးကပ် လေ့လာရမှာပါ။ သင်နှစ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းများကို Collection ထဲထည့်ပြီး သူငယ်ချင်းများနဲ့ မျှဝေနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာအ၀န်းမှ သဘာဝ အလှတရားများ၊ အထင်ကရ အဆောက်အဦးများ ၊ သမိုင်းဝင် တည်နေရာများကို Virtual Reality နည်းပညာဖြင့် ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ။
•	App version: 6.1.9
•	App size: 7.39 MB
•	App compatibility: Android 4.4 and later
သငျ မသိသေးတဲ့ Google ရဲ့ Fun Apps (၃) ခု
Google ဟာ Android ကို ဖနျတီးထားသူ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ စိတျလှုပျရှား ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ App မြားစှာကိုလညျး ဖနျတီးထားပါတယျ။ အခုဖျောပွပေးမယျ့ App မြားဟာ လူသိနညျးပွီး သငျ့ကို ပြျောစရာမြား ဖနျတီးပေးနိုငျပါတယျ။
JustaLine ဟာ Augmented Reality App ဖွဈပါတယျ။ AR Drawing မြားကို သငျ့ရဲ့ ဗီဒီယိုမြားမှာ ထညျ့သှငျးခွငျးဖွငျ့ ပြျောစရာကောငျးတဲ့ ဗီဒီယိုမြားကို ဖနျတီးနိုငျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ဗီဒီယိုမြားကို သူငယျခငျြးမြားနဲ့ မြှဝနေိုငျပါတယျ။ သူ့ကို သုံးဖို့ သငျ့ဖုနျးဟာ ARCore ကို ထောကျပံ့ဖို့ လိုအပျပါတယျ။ Google Pixel , Galaxy S7 , S8 မြားမှာ သုံးနိုငျပါတယျ။ သူ့ရဲ့ အလုပျလုပျပုံကို အောကျက ဗီဒီယိုမှာ လလေ့ာပါ။
Selfissimo! ဟာ Google Search Engine ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ သူက သငျ့အတှကျ အကောငျးဆုံး Selfie မြားကို ရှေးခယျြပေးနိုငျပါတယျ။ သငျက Poses မြားစှာ ပေးရမှာပါ။ သူက အကောငျးဆုံး Selfie မြားကို အလိုအလြှောကျ ဖနျတီးပေးမှာပါ။ ပွီးရငျတော့ သငျ အကွိုကျဆုံး ပုံမြားကို ဖုနျးထဲကို ဒေါငျးလုပျလုပျနိုငျပါတယျ။
Google Arts & Culture ကို သုံးရငျတော့ ကမ်ဘာအဝနျးမှ နာမညျကြျော ပွတိုကျမြားကို သငျ တကယျ လလေ့ာနရေသလို ခံစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ပွတိုကျမြားရဲ့ သမိုငျးကွောငျးမြားကို ဓါတျပုံ၊ ဗီဒီယိုမြားဖွငျ့ ဝဝေဆာဆာ လလေ့ာနိုငျမှာပါ။ ပွတိုကျမြားမှ အနုပညာ လကျရာပစ်စညျးမြား၊ သမိုငျးဝငျ ပစ်စညျးမြားကို အနီးကပျ လလေ့ာရမှာပါ။ သငျနှဈသကျတဲ့ ပစ်စညျးမြားကို Collection ထဲထညျ့ပွီး သူငယျခငျြးမြားနဲ့ မြှဝနေိုငျပါတယျ။ ကမ်ဘာအဝနျးမှ သဘာဝ အလှတရားမြား၊ အထငျကရ အဆောကျအဦးမြား ၊ သမိုငျးဝငျ တညျနရောမြားကို Virtual Reality နညျးပညာဖွငျ့ ကွညျ့ရှုခံစားရမှာပါ။
48 Megapixel ထိရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ Image Sensor အသစ်ကို Sony မိတ်ဆက်
မော်လဒိုက်နိုင်ငံတွင်အရေးပေါ်လူနာတင်စက်လှေလှူဒါန်းပြီး ကုလသမဂ္ဂ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်လိုက်တဲ့ အူရီဒူး